ओभर टाइम काम गर्ने कर्मचारीलाई ३० प्रतिशत भत्ता ! – Khabarhouse
ओभर टाइम काम गर्ने कर्मचारीलाई ३० प्रतिशत भत्ता !
Khabar house | ५ माघ २०७६, आईतवार १५:१७ | Comments
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १४ वटा कार्यलयमा अतिरिक्त मासिक ५० घण्टा काम गर्ने कर्मचारीलाई तलबको ३० प्रतिशतसम्म भत्तादिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पुस ७ बसेको बैठकले २०७७ असार मसान्तसम्मका लागि भत्ता दिने निर्णय गरेको पाइएको हो । कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू भएका कार्यालयहरुमा कार्यरत करार कर्मचारी पनि भत्ता पाउने भएका छन् ।
गत साउनसम्म सरकारले मासिक ८० घण्टा अतिरिक्त काम गर्नेलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिएको थियो। त्यसयता उक्त निर्णयलाई निरन्तरता नदिएको सरकारले पुस ७गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नयाँ निर्णय गरेको हो। संघीय संसद, अदालत, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको कार्यालय, भन्सार, राजश्व, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र राष्ट्रिय किताव खानाका कर्मचारीले भत्ता पाउनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मासिक रुपमा ५० घन्टा वा त्यसभन्दा बढी ओभरटाइम गरेका कर्मचारीलाई सुरुको तलब स्केलको ३० प्रतिशतका दरले भत्ता दिइने छ । भत्ताका लागि कम्तिमा दिनको एक घण्टा अतिरिक्त समय काम गरेको र विद्युतीय हाजिरलाई मान्यता दिनुपर्ने मापदण्ड पनि मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको छ।
५० घन्टाभन्दा कम अतिरिक्त काम गरेकालाई सोही अनुपातमा भक्ता उपलब्ध गराइनेछ । तर दैनिक एक घन्टाभन्दा कम अतिरिक्त समय काम गरेको अवधिलाई यसमा गणना नगरिने निर्णयमा उल्लेख छ । अतिरिक्त समय काम गरेको अवधि गणनामा विद्युतीय हाजिरलाई अधार मानिनेछ । साथै प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि ३० प्रतिशत भत्ता दिइने भएको छ ।